Diyaarad Khaas ah Oo Maanta Madaarka Hargeysa Lagaga Rogay Shixnad Kaadhadhka Cusub Ee Doorashada Madaxtooyada Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Diyaarad Khaas ah Oo Maanta Madaarka Hargeysa Lagaga Rogay Shixnad Kaadhadhka Cusub Ee Doorashada Madaxtooyada Somaliland
Hargeysa (ANN)- Shixnadii Kaadhadhka cusub ee doorashada ayaa maanta soo gaadhay gudida doorashooyinka qaranka. Kaadhadhka cusub ee maanta laga soo rogay madaarka Hargeysa ayaa loogu tallogalay inay bedellaan kuwii hore loo bixiyey ee diiwaan gelinta doorashada Madaxtooyada Somaliland. Diyaarad nooca Jet-ka ah oo laga leeyahay dalka Koonfur Afrika ayaa soo fadhiisatay Madaarka Magaalada Hargeysa ee caalamiga ah oo amaankiisa aad loo adkeeyay. Waxyna Diyaarada siday Kaadhadhka cusubi ka soo qaadday dalka Koonfur Afrika, iyadoo ay soo samaysay kaadhadhka Shirkad Koonfur Afrika laga leeyahay oo la siiyey qandaraaska Kaadhadhka, Sanaaduuqda iyo qalabka kale ee doorashada lagu galayo.
Haddaba, Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka Somaliland Ciise Yuusuf Maxamed (Ciise-Xamari) iyo Guddoomiyaha Guddiga diiwaangelinta, ahna xubin Guddiga ka mid ah, oo goob-joog ku ahaa Madaarka oo Diyaaradda kaadhadhka lagaga rogayay, ayaa Shabakadda wararka ee Ramaasnews iyo TV-ga Caalamiga ah ee Universal xog waraysi khaas ah ka siiyey kaadhadhkaas. Waxay sheegeen in kaadhadhkani yihiin intii hawsha ugu dambaysay, marka laga reebo wax yar oo xaal-xaal ah iyo doorashadii oo ku xigta.
Ugu horreyn Guddoomiyaha Guddiga diiwaangelinta Raabbi Cabdi Maxamed, oo ka jawaabayay su’aal aannu ka waydiinay nooca qalabka diyaaraddu Hargeysa keentay iyo sida uu u arko, waxa uu yidhi; “Waxa farxad wayn noo ah inay maanta na soo gaadheen kaadhadhkii cusbaa ee lagu beddali lahaa kuwii hore ee codaynta. Waxaanannu qaybintooda bilaabaynaa kaadhadhka cusub 10-ka bishan May, sidii hore-ba aannu Warbaahinta uga sheegnay, waanad mahadsantihiin.”
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Ciise Yuusuf Maxamed (Ciise-Xamari), ayaa noo sheegay in marka ay dhameeyaan laba toddobaad iyo dhawr cisho oo lagu dhamaynayo wacyigelinta iyo qaybinta kaadhadhka cusub, wixii ka dambeeyana waxa loo dareeraa noqonayso codaynta doorashada Madaxtooyada oo bisha lixaad June qabsoomaysa.
“Waxaan u malaynayaa intii u dambaysay ee innagu taagnayd ayay ahaayeen kaadhadhkani, waa kuwaa maanta oo ay taariikhdu tahay 4 May 2010 dalka la keenay. Inkasta oo 30-kii April aannu ku wadnay inay inna soo gaadhaan Kaadhadhku, dhawr cisho oo dib u dhac ah ayaa ku yimi, dib u dhacaas oo ahaa mid ka dhashay mushkiladihii bishii hore ku yimi madaarada dalalka Yurub, taas ayaa saddex cisho habsan ah keentay, halka maalina diyaaradda dib u dhac ku yimi.” ayuu yidhi Guddoomiyaha Komishanka doorashooyinka Somaliland Ciise-Xamari.
Wuxuuna intaa ku daray inay hawshoodii Komishan ahaan si fiican ugu soco, isagoo yidhi, “Hawshayadu sidii aannu u ugu talagalnay ayay Insha Allaah u soconaysaa. 10-ka Bishan May waxaannu bilaabaynaa soo bandhigidda qaadashada Kaadhadhka cusub oo Toddoba cisho soconaysa. Toddobadaa cisho waxa ka dambeeya toban cisho oo ay degmooyinka ka soconayso. Wixii ka dambeeyana waxaynu u diyaargaroobaynaa doorashadii haddii Illaahay yidhaahdo oo bisha lixdaad ah sannadka 2010.”
Aammaanka Madaarka Hargeysa ee diyaaradda kaadhadhka sidday soo fadhiisatay, ayaa aad loo adkeeyay, iyada oo Ciidamada Booliska Somaliland iyo kuwa sida degdegga ah u hawlgala SPU. Waxaanay ku hareeraysnaayeen Ciidamadu dacallada Ranway-ga, gaar ahaan goobta ay fadhiday Diyaaraddaasi. Iyadoo xubno khuburo dhinaca amaanka ahi la socdeen Diyaaradda, kuwaas hawshoodu ahayd inay la socdaan qaabka kaadhadhkaa loo rogayo, halka lagu dejinayo iyo indha indhaynta ammaanka madaarka. Wasiirka Arrimaha gudaha Somaliland Cabdillaahi Ismaaciil Cali (Cirro) ayaa isagu si dhakhso ah madaarka uga soo noqdoy.